I-JacuzziPrivateRoom.Add Konke kubandakanyiwe $ 30ppSpa&Meals - I-Airbnb
I-JacuzziPrivateRoom.Add Konke kubandakanyiwe $ 30ppSpa&Meals
San Rafael, Heredia Province, i-Costa Rica
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Gabriela
Yindlu enhle enkabeni yentaba, imizuzu embalwa nje ukusuka esikhumulweni sezindiza. Ungathola ipharadesi lokuphumula elizungezwe imvelo, ukuthula nokuzola. Indlu yonke yenzelwe ukunethezeka okukhulu nokukhululeka kwezivakashi zayo. Izinhlobonhlobo ezinhle zamapulangwe, imibhede evulekile ene-memory foam, konke ukotini ongu-100%, amashawa okugeza, amagilavu okugeza nama-shampoos enzelwe izivakashi ngokukhethekile. Ungajabulela i-Spa yokuphumula, i-Coffee Bar, amasevisi okudla okuhamba ngezindleko ezivamile.
Leli kamelo linesitayela seNdlovukazi Umbhede olala abantu ababili olala abantu ababili ogcwele kanye nendlu eyakhiwe ngamapulangwe eyi-1, elungele abantu abangu-6. Inendlu yokugezela yangasese ene-Jacuzzi, i-shower yokubhucunga umzimba kanye nokufinyelela kuvulande. Le ndawo yokuhlala ivulekile, isondelene futhi ayijwayelekile, inamanothi angokwemvelo, ukunethezeka nobuhle. Ngesevisi engokwezifiso zakho nokunaka, kunobumfihlo obukhulu endaweni ethulile ezintabeni. Itholakala e-San José de Montaña, indawo yayo ekhethekile izokuvumela ukuthi ujabulele imvelo futhi ube imizuzu embalwa ukusuka esikhumulweni sezindiza, kanye nedolobha. Isimo sezulu sayo esipholile silungele ukuphumula, sinamasevisi ahambisana nezindawo ezizungezile.
4.59 · 117 okushiwo abanye